စာဖတ်ကြရအောင် | PoemsCorner
ယနေ့လူငယ်တွေစာဖတ်ကြပါသလား။ ဒီမေးခွန်းကိုအရင်ဆုံကိုယ်ကိုကိုယ်ဖြေခိုင်းကြည့်တော့ အဖြေကသိပ်အဆင်မပြေဘူးဗျာ..ဒါနဲဆက်စပ်စဉ်းစားမိရာကနေ ဒီစာစုလေးကို ရေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ စာအုပ်ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါ အုပ်ရေ ဘယ်လောက်ရိုက်ရပါသလဲ.။ ယနေ့ခေတ်မှာ အများဆုံး သုံးထောင်ကျော်ပါတဲ့ခင်ဗျာ..ကဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ထုတ်တဲ့စာအုပ်နဲ့ လူဦးရေ အချိုးချကြည့်ရမယ်ဆိုရင် အင်း အဆင်မပြေပြန်ဘူး…တဆင့် ရန်ကုန်မြို့တစ်ခုကိုပဲ အချိုးချကြရအောင်ဗျာ ရန်ကုန်မှာ လူဦရေ ၁၀ သန်းကျော်ရှိတယ် ထားတော့ ပညာတတ်စာဖတ်နိုင်သူ ၅ သန်းထား .. အဲ …အချိုးချဖို့တော့ အဆင်မပြေပြန်ဘူးဗျာ .. ဘယ်လိုပဲတွေးတွေး ကျွန်တော်တို့တွေ စာကိုတကယ်ဖတ်နေကြပါရဲ့လား … ထပ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ စာရေးဆရာအတော်များများဟာ စာအုပ် ၆ အုပ်လောက်ထုတ်ဝေပြီးရင် တော်တော်တန်တန် လူလူသူသူအဆင့်အတန်းမျိုးနေနိုင်၊ စားနိုင်ပြီဆိုပဲ .. ဒီမှာတော့ ..စာအုပ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လောက်ရေးပြီးတာတောင်… အဆင်ပြေတဲ့သူဆိုတာ..အရှားသားမဟုတ်လား …. တစ်ချို့တလေတော့လည်းအဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်ပါတယ် ..ဒါပေမယ့်အများစုကတော ..အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ …
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ … အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်..စာမဖတ်ဖြစ်ကြပါဘူး … အဓိကကတော့ … စာအုပ်ဖိုး၊ စာဖတ်ဖို့အချိန်နဲ့ ၊ လောကဓံအမျိုးမျိုးကြောင့် စာဖတ်ဖို့ကိုပျက်ကွက်ကြရပါတယ်…တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်တွေကတော့ မတူကြပါဘူး …. တူတာတစ်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ဖိုကိုပျက်ကွက်တာပါပဲ ….စာဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခွင့်အရေးရရင်ရနိုင်သလို..မဖြစ်ဖြစ်အောင်၊ ရအောင်ကြိုးစားဖတ်ရှု့ရမှာဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့်.. သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို.. တိုက်တွန်းချင်တာကတော့….ကျွန်တော်တို့တွေကြိုးစားပြီးစာများများဖတ်ကြရအောင်လားဗျာ …….။
In: ဆောင်းပါး Posted By: Tin Myo Naing Date: Nov 20, 2012
Leave comment3Comments & 236 views
ဖတ်မယ့်သူတွေရှိပါသေးတယ် ပိုများလာဖို့ကို မျှော်လင့်မိပါတယ်
Yeah.. that’s right.. many ppl are luck of knowledge since they don’t bother of reading. We should beareader first, if we want our generation to read books.
By: KC at Jan 13, 2013